ABS Wheel Speed ​​Sensor
Crankshaft နှင့် Camshaft အာရုံခံကိရိယာ
Weili Catalog - 2021-10 တွင် ပစ္စည်းအသစ်များ
Weili သည် ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကို အလွန်အာရုံစိုက်ပြီး၊ အကွာအဝေးသည် အရေးကြီးဆုံး ပင်မစွမ်းရည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ဤလတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကက်တလောက်တွင် ပစ္စည်းအသစ် 33 ခုရှိသည်၊ quotation တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။ အစိတ်အပိုင်းအမည် WEILI အစိတ်အပိုင်း NO APPLICATION ABS အာရုံခံ WL-A02092 6C0927903...
Weili Catalog - 2021-08 တွင် ပစ္စည်းအသစ်များ
Weili သည် ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကို အလွန်အာရုံစိုက်ပြီး၊ အကွာအဝေးသည် အရေးကြီးဆုံး ပင်မစွမ်းရည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ သြဂုတ်လ-2021 တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကတ်တလောက်တွင် ပစ္စည်းအသစ် 25 ခု ရှိသည်၊ quotation တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။ အစိတ်အပိုင်းအမည် WEILI NO. အပိုင်း နံပါတ် လျှောက်လွှာ ABS အာရုံခံ WL-A04110 OE: 47910...
Weili သည် Tesla ABS အာရုံခံကိရိယာ အပြည့်အစုံကို ပေးဆောင်သည်။
admin မှ 21-07-14 ရက်နေ့တွင်
2020 ခုနှစ်တွင် Tesla သည် plug-in နှင့် ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်ကား အပိုင်းများတွင် အရောင်းရဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး plug-in စျေးကွက်၏ 16% ( plug-in hybrids များပါ၀င်သည် ) နှင့် battery-electric (လျှပ်စစ်သက်သက်) စျေးကွက်၏ 23% ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ . Tesla အတွက် မော်တော်ယာဥ် အစိတ်အပိုင်းများ ဝယ်လိုအားသည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တိုးလာလိမ့်မည်...
Weili Catalog - 2021-06 တွင် ပစ္စည်းအသစ်များ
Weili သည် ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကို အလွန်အာရုံစိုက်ပြီး၊ အကွာအဝေးသည် အရေးကြီးဆုံး ပင်မစွမ်းရည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ဤလတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကတ်တလောက်တွင် ပစ္စည်းအသစ် 24 ခုရှိသည်၊ quotation တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။ အစိတ်အပိုင်းအမည် WEILI သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ CKP/CMP အာရုံခံကိရိယာ WL-C21057 OE:464193...
Weili အဖွဲ့သည် 2020 တွင် Automechanika Shanghai ဖြစ်သည်။
automechanika Shanghai သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၏ အရေးကြီးဆုံး ပြပွဲကြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပြီး အပိုပစ္စည်း၊ ပြုပြင်မှု၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် စနစ်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ချိန်ညှိခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း နှင့် ...
တယ်လီ : ဝ၈၆-၁၃၇၈၀၁၃၃၇၆၁
Skoda Abs အာရုံခံကိရိယာ, Vw Abs အာရုံခံကိရိယာ, Truck Abs အာရုံခံကိရိယာ, Audi Abs အာရုံခံကိရိယာ, ထရပ်ကားဘီးအမြန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ, ထိုင်ခုံ Abs အာရုံခံကိရိယာ,